Mbola lavitra ny lalana hodiavina vao ho tonga amin’ny fametrahan-kilatsahan-kofidiana isika ka tsy mbola fantatra izay mety ho fiovan-kevitr’ity mpanao politika ity. Ny toe-draharaha eto amin’ny firenena ihany koa tsy mitsahatra mivoatra andro aman’alina. Nifarana omaly tolakandro, araka ny efa nanarahan’ny rehetra azy tamin’ny haino amanjerim-panjakana ny fivoriana ara-potoana faharoa natrehan’ireo solombavambahoakan’i Madagasikara tamin’ity taona ity. Nambaran’ny depiote Jean Max tao anatin’ny kabary famaranana nataony fa nahatratra 44 ireo volavolan-dalàna nolanian’ireo depiote teny Tsimbazaza nandritra ny 90 andro nivorian’izy ireo ary volavolan-dalàna 2 no mbola haverina hodinihana amin’ny manaraka. Tsy maintsy hisy ny fivoriana tsy ara-potoana hatao ato ho ato fa mbola volavolan-dalàna iankinan’ny aim-pirenena maromaro no hakana fanapahan-kevitra hofidiana ety aminay, hoy izy. Tafiditra ao anatin’izany ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana izay tokony halefan’ny governemanta amin’izay eny Tsimbazaza mba hahafahan’ny depiote mandinika sy mandany azy.